↑ Jacobson, R. A. (2005). "The GM values of Mimas and Tethys and the libration of Methone". Astronomical Journal 132 (2): 711–713. doi:10.1086/505209. Bibcode: 2006AJ....132..711J.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မီမက်စ်_(ဂြိုဟ်ရံလ)&oldid=624291" မှ ရယူရန်
၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၁၁:၃၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၁၁:၃၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။